Manangana Ady Ireo Fantsona TV Ao Okraina Noho Ny Fandrarany Ireo Fandaharana Rosiana Manao “Fampielezankevitra” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2015 15:24 GMT
Tsy mila tantara mitohy Rosiana amin'ny TV ireo Okrainiana… Farafaharatsiny mandra-pahitan'ireo fantsona TV kilema anatin'ny lalàna vaovao. Sary natambatr'i Anna Poludenko-Young
Nandrara fandaharana Rosiana maro fandefa amin'ny TV i Okraina, izay lazainy ho manindrahindra ny fitondrana Rosiana, ny tafika, ary ny fampiharana lalàna. Na izany aza, toherin'ireo fantsona fahitalavi-pirenena Okrainiana, izay efa mikaroka sahady ireo lesoka anatin'ny fanaovan-dalàna vaovao, izany lalàna vaovao mamaritra ireo fitsipika mikasika ny fandraràna votoaty izany.
Ireo zavatra voarara
Efa ho roa volana izao no nampiharana ny lalàna fandraràna ireo fandaharana Rosiana “mpanao fampielezankevitra” amin'ny fahitalavitra ao Okraina. Mitontaly 368 ireo tantara mitohy amin'ny fahitalavitra sy ireo sarimihetsika voalaza ho manindrahindra ny mpitandro filaminana Rosiana sy ny tafika no voarara. Mety jerena toa tsy olana goavana izany, saingy ny tena marina, ny ankabeazan'ireo fandaharana “vita Rosiana” ireo no nibahana ny fotoana mahabetsaka ny mpijery any amin'ny ankamaroan'ireo fantson'ny fahitalavitra Okraniana.
Araka ny voalazan'i Pylyp Illienko, lehiben'ny Masoivohom-panjakana Okrainiana Misahana ny Sarimihetsika, nisy andiana manampahaizana nandinika ireo sarimihetsika sy ireo tantara mitohy amin'ny TV efa nahazoana alalana mialoha ho alefa amin'ny haino aman-jery ao Okraina. Ny votoaty izay hitan'ireo manampahaizana fa ahitana “fampielezankevitra na fanalam-baraka noho ny antony ara-poko” dia voarara.
Voararan'io lalàna vaovao io ireo sarimihetsika, ireo tantara mitohy, ireo fanadihadiana, eny fa na ireo sarimiaina aza rehefa “manindrahindra ny fitondrana Rosiana”, ny tafika, ny fampiharana lalàna ary ireo “sampan-draharaha famaizana hafa avy amin'ilay fanjakana mpanafika” izay amin'ny fomba iray dia “manamarina na manao ho ara-drariny ny fibodoana ny ampahany amin'ny tanin'i Okraina.”
Na izany aza, ireo sazy mahazo ireo mpandika lalàna dia mafy tsy zaka ho an'ny fantsom-pirenana Okraniana tsirairay. Raha misy mpandefa fandaharana tratra mangalatra, mety hiovaova eo amin'ny $600 ka hatramin'ny $3150 (13.000 hatramin'ny 68.000 UAH) ny sazy, miankina amin'ny hoe vao voalohany ilay fandikana natao sa efa niverimberina.
Ny Famoronana no zava-dehibe
Ahitana lesoka marobe io fanaovan-dalàna vaovao io ho an'ireo izay tia mamoroporona kely. Ohatra, araka ny lalàna vaovao, tsy tratran'ny sakana ireo sarimihetsika sy ireo tantara mitohy amin'ny fahitalavitra niaraha-nanao (taminà firenena roa na maro) sy nivoaka talohan'ny 1 janoary 2014. Noho izany, raha toa ka ahitana trano mpamokatra Okrainiana na hafa ankoatran'i Rosia anatin'ny teny fankasitrahana, dia tsy voakasik'io lalàna vaovao io ilay famokarana. Mora ny mametraka andalana fanampiny anatin'ny teny fankasitrahana, raha sarotra kokoa ny manamarina ny tena fisian'ilay fiaraha-mamokatra.
Efa nisy fantsona sasany amin'ny TV Okrainiana nanandrana nampiasa io lesoka io ho amin'ny tombontsoany. I “Ukraina”, izay fantsom-pirenena manana ny taham-pihainoana avo indrindra (araka ny angona tamin'ny Jona 2015), dia nahavita nahazo fahazoan-dàlana avy amin'ny Masoivohom-panjakana Misahana ny Sarimihetsika (След, mitovy amin'ny CSI) hizara ny tantara mitohy “Traces” mandeha amin'ny TV Rosiana. Ny fitaka tamin'izany dia natolotr'i “Ukraina” ho tantara mitohy manana lohateny vaovao ilay votoaty, ka lasa “Sampan-draharaha Manam-pahaizana Mifototra Amin'ny Zava-misy: Sampana Misahana ny Fanadihadiana Iraisam-pirenena Momba ny Heloka Bevava,” voalaza fa novokarin'ny orinasa mpamokatr'io fantsona io tamin'ny taona 2015.
“Raha ny marina, tantara mitohy efa tranainy izy ity, ary nampian'ilay fantsona sehatra vitsivitsy tetsy sy teroa tamin'ny taona 2015. Novàna ny maha izy azy an'ireo mpilalao naka ny toeran'ireo mpiasan'ny sampan-draharaha fiarovana Rosiana, ary novàna ny fanamiany mba tsy hisy marika na karatra famantarana ho hita,” hoy i Oleksandr Tkachenko, tale mpanatanteraky ny vondrona mpifandrafy “1+1 Media” nandritra ny valandresaka tao Kyiv. “Na ny anaran'ilay masoivoho aza dia novàna. Raha tokony ho ‘federaly’ no niantsoana azy, tahaka ny tao anatin'ny dika Rosiana niandohany, dia novain-dry zareo ho ‘mifandray amin'ny zava-misy’. Tiany hitovitovy karazana aminà zana-tsampana fiarovana ilay izy, saingy raha ny tena izy dia tantara mitohy Rosiana fandefa amin'ny fahitalavitra.”
Azo antoka fa mety amin'ireo fantsona fahitalavitra lehibe maro ao Okraina ity karazana “fampifanarahana” ity, satria efa zatra manjifa ny entan'ny media Rosiana ireo Okrainiana mpijery. Araka ny fikarohana notarihan'ny vondron'olom-pirenena Vidsich, ny 33% amin'ireo votoatin'ny fahitalavitra hita ao amin'ireo fantsona Okrainiana dia vita avy ao Okraina, ny 29% avy any Rosia, ny 33% avy amin'ireo firenen-kafa, ary ny 5% kosa dia vokatra tranainy hafa vita nandritra ny vanimpotoanan'ny Firaisana Sovietika.
Koa satria tsy maintsy mikaroka fomba hanoloana ny votoaty “vita-avy-any-Rosia” ireo fantsona TV Okrainiana, dia misy amin'izy ireo efa manomboka mijery ireo tsena Tandrefana, raha toa kosa ny hafa mijery ireo vokatra Aziatika, toy ireo fandaharana avy ao Korea Atsimo. Ireo mpitsikera amin'ny fahitalavitra, kosa, dia mampitandrina fa diso zatra loatra ireo soatoavin'ny vokatra Eoropeana Atsinanana anatin'ny fandaharana tena ankafiziny ny vahoaka Okraniana, hany ka inoana fa “tsy hahomby” ireo sarinteny ara-kolontsaina sy ireo votoatin-tantara tsy mahazatra.
Okraina 13 ora izay